रामकुमारी झाँक्रीले दिएको एमाले मिल्न सक्ने उपाय के हो ? - Reel Mandu
रामकुमारी झाँक्रीले दिएको एमाले मिल्न सक्ने उपाय के हो ?
काठमाडौं । नेकपा एमालेको असन्तुष्ट माधव कुमार नेपाल पक्षकी नत्री रामकुमारी झाँक्रीले एमाले एकता हुने अचुक उपाय आफूसँग रहेको बताएकी छिन् ।
फुटको अवस्थामा रहेको एमाले मिल्नको निम्ती अब केही विकल्पहरु मात्र बाँकी रहेको भन्दै उनले त्यो विकल्पमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहमत भएको खण्डमा पार्टी एक हुने बताएकी हुन् । त्यसको लागि उनको एक सर्त छ– एमाले अध्यक्षबाट केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएर अन्य नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।
उनले ओलीलाई आवेग र कुण्ठाबाट ग्रसित भएर आफूहरूसँग बदला नलिन समेत भनिन्। उनले भनिन्, ‘तपाईंले पार्टी एकता गर्न चाहनुहुन्छ, अझै पनि लोकतन्त्रलाई बचाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईंले मार्ग प्रशस्त गर्नुस्। तपाईंले पार्टी अध्यक्ष छोड्नुस्। र, नेकपा एमाले एकताबद्ध पनि हुन्छ। र, अब हामी नयाँ ढंगले अगाडि जान पनि सक्छौं ।’
उनले अघि भनिन्, ‘होइन भने हामीसँग पटकपटक बदलाको भावना लिने र एक प्रकारले उहाँले नै भनेजस्तो काठमाडौंमा रिसाएको बिरालोले कहाँ गएर खाँबो चिथोर्छ भन्नुहुन्थ्यो त्यो बेला। अहिले पनि उहाँले त्यो खाँबो चिथोरेजस्तो कुरा गर्नुभएन। किनभने हामीसँग बदला लिएर हुँदैन ।’
बानेश्वरमा मंगलबार भएको माधवकुमार नेपाल पक्षीय भेलामा सहभागी सांसद झाँक्रीले स्पष्टीकरणबारे आफूहरूले मिडियाबाटै थाहा पाएको बताइन्। आधिकारिक पत्र आइनसकेको र प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएकै आधारमा कारबाही गर्न मिल्ने नमिल्ने सर्वोच्च अदालतले नै व्याख्या गरिसकेको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘हामीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भयो। स्पष्टीकरण होइन, कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने फ्लोरबाट कुरा आयो भन्ने पनि थाहा पायौं। तर, अफिसियल चिठी प्राप्त गरेका छैनौं। मेरो विचारमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएकै आधारमा हामीलाई कारबाही हुने या नहुने भन्ने विषय सर्वोच्च अदालतको फैसलामा व्याख्या पनि छ । त्यही कारणले पनि उहाँहरुले हामीलाई चिठी नपठाउनुभएको होला। चिठी पठाउनुभयो भने राजनीतिक हिसाबले यसको ‘कन्डेम’ गर्छौं।’
उनले आफूहरू लोकतन्त्र, संविधान र व्यवस्था बचाउनका लागि लडेको र अब यसकामाथिको स्पष्टीकरणका लागि खण्डन गर्ने बताइन्। ‘अब कहीँ कानुनी रुपमा लडाइँ लड्नुपर्ने रहेछ भने दुई लाइनको स्पष्टीकरण पनि दिन्छौं। तर, यो स्पष्टीकरण हामीलाई सोध्नुपर्ने कुरै होइन’ झाँक्रीले भनिन्।